Amaqembu apheka ayathulula azilungiselela ukuqala kwesizini – Bayede News
Amaqembu apheka ayathulula azilungiselela ukuqala kwesizini
AMAQEMBU amakhulu esigabeni esiphezulu kunobhutshuzwayo
AMAQEMBU amakhulu esigabeni esiphezulu kunobhutshuzwayo eNingizimu Afrika okuyiMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates, nalawo awaphonsela inselelo kuyiBidvest Wits neSupersport bayayikhipha imali uma kuza ekuthengeni abadlali. IKaizer Chiefs ikhipha imali kanye emveni kwamasizini amabili noma amathathu.
Abalandeli beKaizer Chiefs ayibathokozisi indlela izinto ezenzeka ngayo ekilabhini yabo njengoba isashaya ngonyawo lwangesizini edlule. Ikhulule uPule Ekstein, uBhongolwethu Jayiya noRyan Moon yabe isisayinisa uLazarous Kambole odabuka eZambia kuphela, yize ingenzanga kahle ngesizini eyedlule futhi sekuphele namasizini amane inganqobi nesisodwa isicoco.
Izimbangi zeChiefs i-Orlando Pirates ihamba phambili ngokusayinisa nokudayiswa kwabadlali. Iqale yakhulula uThabo Qalinge, u-Ayanda Nkosi, uThabo Matlaba, u-Abbubaker Mobara noJackson Mabokgwane. Yasayina uFortune Makaringe, uSiphesihle Ndlovu (baqhamuka kuMaritzburg United), uTebogo Tlolane (uqhamuka kuChippa United), uTshegofatso Mabasa‚ uKabelo Dlamini noBongani Sam (baqhamuka kuBloemfontein Celtic). Iphinde yawelela phesheya kwezilwandle yasayinisa unoziti odabuka eFrance uJoris Delle.
Namaqembu athathwa njengamancane enza kahle ekudayisweni nasekuthengeni abadlali.
IMaritzburg United iqinisikise ukuboleka uPhumlani Ntshangane kuBidvest Wits. I-United isayinise uJudas Moseamedi noKwanda Mngonyama ibathatha kuCape Town City. IBlack Leopards imemezele ukusayinisa umqeqeshi omusha uLionel Soccoia ozosizana noPatrick Mabedi. Iphinde yamemezela ukusayinisa uThuso Phala (obedlalela iSupersport United) noMogakolodi Ngele (obedlalela iMamelodi Sundowns). UMlungisi “Professor” Ngubane umenyezwele njengomphathi weqembu.
IChippa United isiqinisekise ukuthi isisayine uGladwin Shitolo, uPhetso Maphanga, uDiamond Thopola noCaio Marcelo (bonke bebedlalela i-Orlando Pirates). IBidvest Wits isayinise unoziti we-Ajax Cape Town uBrandon Petersen, uPhathutshedzo Nange obedlalela iBlack Leopards noPrince Nxumalo obedlalela i-Ajax Cape Town.